Australia oo Tuhun U Xirtay Nin Soomaali Ah. – Shabakadda Amiirnuur
November 28, 2017 7:35 am by admin Views: 100
Xilli ay dowladaha gaaladu isku diyaarinayaan u dabaal degga ciidooda Kirismiska ayaa waxaa jira baqdin ay ka qabaan dhanka ammaanka, waxaana dal walba uu ciidamo gaar ah u xil saaray ka hor tagga weerarada ay macquulka tahay iney geystaan dadka Muslimiinta ah.
Ciidamada Boliska ee dalka Australia ayaa xabsiga u taxaabay nin Soomaali ah oo lagu eedeeyay in uu maleegayay weerarro ka dhan ah dadka Australian-ka ah xilliga Ciidda Kirismiska.
Saraakiisha Booliska ma sheegin magaca ninkan bale waxaa ay sheegeen in uu yahay 20 Jir ku dhashay Australia waalidkiisuna yihiin Soomaaliya.
Shane Patton oo ah Taliye ku xigeenka Booliska Melbourne ayaa sheegay in minkan uu qorsheynayay in uu weerar ku qaado fagaaraha Federaalka ee bartamaha magaalada marka ay dadka isugu yimaadaan isaga oo adeegsanaya qoryaha sida darrandooriga u dhaca.
Ma jiro hub lagu soo qabtay Ninkan, oo kaliyana waxaa lagu heystaa tuhun ah in uu taageero dhaqdhaqaaqyada islaamiga ah ee ka jihaadaya caalamka.
Sida ay sheegayaan madaxda Boliska, wiilkan oo maxkamadda la geynayo maanta oo Talaado ah ayaa lagu heystaa xiriirro dhinaca Internetka ah oo uu la leeyahay waxa ay ugu yeereen argagixisada, mana jiraan dad kale oo gudaha Australia jooga oo uu la xiriiro.
Baqdin iyo qalqal xoog leh ayaa heysta dowladaha Yurubta iyo Mareykanka waxaana ugu wacan weerarada ay fuliyaan kaligi duulayaasha ka careysan sida loo gumaadayo walaalahooda Muslimiinta ah.